सुनको भाउ तोलामा ९ सय रुपैयाँले बढ्यो » जन्मभुमी को आबाज
सुनको भाउ तोलामा ९ सय रुपैयाँले बढ्यो
By Dilip Bhandari	 On २०७७ चैत्र १९, बिहीबार ११:१८ गते 29 0
काठमाण्डाै – सुनको भाउ आज एकैदिन ९ सय रुपैयाँले बढेको छ ।
हिजो तोलामा ८५ हजार ६ रुपैयाँ रहेको सुनको भाउ आज बढेर ८६ हजार ५ सय रुपैयाँमा पुगेको छ।
विश्वमा कोरोनाको जोखिम फेरि बढेकाले लगानी क्षेत्र निश्चित भएको छैन । लगानी सुरक्षित गर्न धेरैले सुनमा लगानी गर्न थालेकाले सुनको माग बढ्दा भाउ बढेको उहाँले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुनकाे भाउ प्रतिऔंस १७ सय १२ दशमलव ९ डलर रहेको छ ।
६३ वर्षीया सौतेनी आमालाई बलात्कार गर्ने २३ वर्षीय युवालाई जन्मकैद
मोफसलकै प्रतिष्ठित आहा ! रारा गोल्डकप : उद्घाटन खेलमा घरेलु टिम सहारा संग एपीएफ भिड्ने (तालिका सहित)
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य,तोलामा कति ?
तोलामा ९ सयले बढ्यो सुनको भाउ
सुनको मूल्य तोलामा एक हजार बढ्यो